Google Text-to-speech 3.12.9 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
Aptoide အား ထည့်သွင်းပါ
စတိုးမှ ဒေါင်းလုပ်များ 3k - 5k
ဗားရှင်း 3.12.9 လွန်ခဲ့သော7လက
Application များ ကိရိယာများ Google Text-to-speech
Google Text-to-speech ၏ ဖော်ပြချက်
Google Text-to-speech powers applications to read the text on your screen aloud. For example, it can be used by:
• Google Play Books to 'Read Aloud' your favourite book
• Google Translate to speak translations aloud so that you can hear the pronunciation ofaword
• TalkBack and accessibility applications for spoken feedback across your device
• ... and many other applications in Play Store
To use Google Text-to-speech on your Android device, go to Settings > Language & Input > Text-to-speech output. Select Google Text-to-speech Engine as your preferred engine. Note, on many Android devices, Google Text-to-speech is already turned on, but you can update to the latest version here.
Supported languages: Bangla (Bangladesh), Bangla (India), Cantonese (Hong Kong), Czech, Danish, Dutch, English (Australia), English (India), English (United Kingdom), English (United States), Finnish, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Khmer, Korean, Mandarin (China), Mandarin (Taiwan), Nepali, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazil), Russian, Sinhala, Spanish (Spain), Spanish (United States), Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian and Vietnamese.</br></br></br></br></br></br></br></br>
Google Text-to-speech အတွက် စတိုးအသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Google Text-to-speech အပေါ် စတိုး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
ဘာသာစကား အားလုံး လက်ရှိ ဘာသာစကားအား ပထမဆုံး အင်္ဂလိပ်
Google Text-to-speech အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
ဤ application သည် ဗိုင်းရပ်စ်၊ မေးလ်ဝဲနှင့် အခြား မသမာသော တိုက်ခိုက်မှုများကို စစ်ဆေးသည့် လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုကို အောင်မြင်ခဲ့ပြီး မည်သည့်အန္တရာယ်မျှ မပါဝင်ပါ။
shorttripp86 စတိုး 486 68.04k
Google Text-to-speech နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
နောက်ထပ် ကိရိယာများ အက်ပ်များကို ကြည့်မည်
APK အကြောင်း Google Text-to-speech အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 3.12.9
အသုံးပွုရနျ ကိုကျညီမှု Android 4.4+ (KitKat)
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://www.google.com/policies/privacy
App Name: Google Text-to-speech
File Size: 21.33MB
Release date: 2017-07-25 11:27:55
အနညျးဆုံး စခရငျ: SMALL
အထောကျအပံ့ပေးနိုငျသော စီပီယူ: armeabi-v7a
လကျမှတျ SHA1: 38:91:8A:45:3D:07:19:93:54:F8:B1:9A:F0:5E:C6:56:2C:ED:57:88
ထုတျလုပျသူ (CN): Android
အဖှဲ့အစညျး (O): Google Inc.
နယျမွေ (L): Mountain View
နိုငျငံ (C): US
ပွညျနယျ/မွို့တျော (ST): California
Google Text-to-speech APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
ကောင်းမွန်သော အက်ပ်စတိုးတစ်ခုကို သင့်အား ပေးနိုင်ရန်အတွက် ကွတ်ကီးများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုပါသည်! ဆိုက်အား ၀င်ရောက်အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် ယင်းအား သဘောတူခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုသိရှနိုင်ရန် ဤနေရာတွင် ရှာပါ .